Indlela yokufumana iimvakalelo ezingalibalekiyo ngokwesini: sizibandakanya zonke iinjongo
Ngaba kuyinyaniso ukuba amadoda athande amehlo kunye nabasetyhini ngeendlebe? Hayi, ngaphezu kokubona kunye nokuvalelwa kumdlalo wothando kufuneka kubandakanyeke kunye nazo zonke ezinye iingqondo, ezifana nokuthintela, ukuvumba, kunye nokutya. Ungakwazi ukudibanisa yonke into kwiimigangatho okanye zonke ngokukhawuleza - kwaye isondo esingalibalekiyo siqinisekiswa kuwe!
Chukumisa . Ulonwabo lokwenza uthando, ngaphandle kokuchukumisa umhlobo, umntu ofayo nje akafumaneki. Ndiyathemba ukuba uyayazi indlela enkulu ngayo ukutshintshela ulwimi okanye izandla zesigqeba esifanayo somzimba? Yaye unokunyamezela iqabane lakho ngeenwele, iinyawo kunye ne-eyelashes!
Khangela ukuba uyazi njani umthandi ngokufanelekileyo kumgca wokuthintela, uninzi kangakanani uphendule ngokuchukumisa le ndawo okanye indawo ye-thatergenic. Emva kokuba ulungiselele loo nkampani "isikhokelo" somlingane, uya kufumana ikarama enkulu kumdlalo wothando, kwaye umhlobo wakho uya kuvuyela indlela oziva ngayo. Unganqikazi, i-ischinovye izixhobo zokubhokoxa: umzekelo, sebenzisa intsiba okanye u-sharkik ongenalutho. Kwakungekho nto ukuba abalawuli baseMpuma babone izancinza ukuba zenziwe ngefayili kunye nezibetho ezinqabileyo. Yaye ukuba i-young man yakho iyakudumisa? Kule mizekelo, kwakhona, ukulungelelaniswa okuhlukahlukeneyo kuye kwaqulunqwa: ukusuka kwizikhwebu ezithambileyo ukuya kwi-paddles e-elastic - nanguwo wonke umntu unokukhetha oko kukumxhatshazelisayo kwaye uyamjabulisa.
Ingqiqo yevumba . Intombazana kufuneka iphunga elimnandi! Enyanisweni, kunzima ukwazi ukuba yeyiphi ininzi yempepho enomdla oyithandileyo, uyayiphatha imfesane yakhe yesondo kwaye ikhuthaza ukukhanga.
Ibhotile eneempepha ezithobekileyo, okhetha ukuzenza emsebenzini e-ofisini, ulibale kwideskrikhi yedeskithophu. Ekhaya (funda - phakathi) kufuneka uthathe isikhephe esichukumisayo, esichukumisayo nesinandisayo. Yifakwa emgodini - endaweni yokulala ebusuku. Kwakhona uMarilyn Monroe - kwaye kwakukho esinye sezixhobo zakhe eziyimfihlo!
Kuthekani kuthi xa ekhetha ukutsha kunye nephunga elimnandi, kwaye nayiphi na iphunga elimnandi liyamcasula? Vala ngokuvala umnyango kwigumbi lokulala, ukuze ungene ngaphakathi kwiikhiloji ekhitshini, kungakhathaliseki ukuba intlanzi entle okanye inkukhu ungayidla ngokutya.
Ngendlela, iqabane lakho alifanele lilibale ngendoda "yiphunga elimnandi." Akanayo ixesha lokukhetha i-perfume efanelekileyo? Akukho nkathazo, siya kukhetha yona! Ukongezelela, akuyi kudingeka ukuba udibanise ubuchopho bakho phezu kwesipho kumthandwa wakho: ibhotile yamanzi angasese angamathoyilethi yamadoda iya kuhlala isisipho esihle kunoma yimuphi umthendeleko okanye ieholide.
Ukutya . Iingcamango zaloo mvakalelo zinika ubudlelwane obusenyongweni kunye ne-piquancy. Imemori iza isiqephu izkinohita "Iiveki ezisixhenxe neyesigamu": yiyiphi imveliso kuphela ayizange idlale umlingisi oyintloko, ukuchitha okanye ukusabalalisa kwesikhumba se heroine! Kwaye kwakubonakala ngathi yinto ekhohlisayo kwaye idonsa. Zama kwaye uhlaziye ubomi bakho ngokwesondo kwaye usebenzise into enjalo.
I-cream ephosweyo - mhlawumbi ingqonge kakhulu kwaye ifanelekileyo ingqiqo ngesondo, kodwa kungeyona yodwa. Yonke into oyithandayo, okanye iqabane lakho, lingeniswa ebomini bakho obusondeleyo, ngaphandle kokuba kungabangela ukucasuka okanye ukunyuka. Ukuchitha ubuncinane ubusi okanye i-jelly kuyo nayiphi na indawo yomzimba wakhe kwaye ngokukhawuleza ukhawuleze ubunzima obuhle. Ngendlela, kukho ii-oyile ezikhethekileyo kunye nee-gels zokuzonwabisa ezithandanayo, ezo zintlobo ziyahlukahluka kwi-strawberry ukuya kwintyinti - ngubani othanda kakhulu. Abanye bafudume befudumala xa bexhamla, okanye ngokuphambene nendawo - baba yinto epholile kwaye elula ekhumbeni. Iimpawu ezintle zizonto ezidliwayo zokusetyenziswa kwi-blowjobs: iqabane lakho liya kufumana inxalenye yeentlungu ezingenakulibaleka!
Kodwa akufanele ulandele ngokutya okuluhlaza. Ukulala ngesigqabi akuyona into enomdla kakhulu, nangona kubonakala ngathi i-spice.
Ukuva . Uva ntoni xa wenza uthando? Ingxolo edeleyo yesitrato, ilizwi labantwana ekamelweni elilandelayo, ukuxubusha kweTV okanye ukukhala kolutsha oluhlangene nomnyango ... Nangona ezi zandi zingaphi ziphazamise nawe, azibancedi ukuzonwabisa.
Umculo udala umoya wothando olungcono. Kuhlala kuphela ukukhetha omnye oya kuxhasa imvakalelo yeemvakalelo ehambelana nomzuzwana. Amanxeba angakwazi ukuvela kwiimvumi ezilula zothando, xa uziva ukhululekile, uvakalela izandi, zithintela izithandane zamatye - ukuba umphefumlo uphazamisa ukuthanda. Okanye uzame ithawuni evezwe ngexesha lokubona kwakho kuqala ...
Kwaye, ke, ilizwi lakho . Ngaba kunokwenzeka ukuthetha ngethoni engathandekiyo, i-grouchy okanye ichukumisayo ngokulindela ubuhlobo obusondeleyo? Uninzi lwabasetyhini abanganeliseki ngesondo luya kumlingani ngokuchanekileyo. Nantoni na eyenzekayo, musa ukuphinda iiphoso zabo.
Ngethuba lolo thando luthando, into emnandi kakhulu into endiyayiyova ngayo yinto eyanelisayo. Musa ukuzibamba! Akukho nto inomdla kakhulu njengento ebumnene yowesifazane oshisayo. Kodwa akudingekile ukuba usebenze, ibhedi lothando alukho isiteyimu, asidingi nayiphi na i-finesse, kuphela iimvakalelo zakho zangempela kunye.
Ukujonga . Ubani umyeni wakho okanye intombi yakho ebona xa evula umnyango: isilwanyana esingenasondo, esisidima, esingenakunqwenela esinomsoko ebusweni bakhe, esongwe ngesambatho esingenasigxina okanye ngefeshi ephazamisayo eyayilindele nje ukufika kwakhe? Kakade, ukuba ngumntwana owenza iimfuno imihla ngemihla kunzima. Kodwa kunjalo, i-mask ingenziwa kwindlu yokuhlambela, kwimfihlelo ye-otdomochadtsev, isambatho esifudumeleyo sokukhupha kwiindlela zokulala kunye neengxaki ze-zheostavat kunye nazo zonke iingcamango ezimbi.
Intuition . Xhuma kumdlalo obusondeleyo omnye umva-intuition. Indlela yokwenza i-sexisubstantially. Ubugcisa bokusondelana ngenye yeendawo ezimbalwa zendalo, kufumaneka phantse kuwo wonke umntu kwaye rhoqo. Kule meko, isiseko sobuchule siya kubambisana. Yabelana ngeengcamango eziyimfihlo, ukubonwa, ukwesaba kunye neqabane. Ngoko uya kwandisa umnwabo ngokusondelana ngokuphindaphindiweyo. Funda ukudala nokufumana uthando ngazo zonke iingqondo zakho!
Kodwa yintoni endiyithethayo, nangona ibinzana elithi "Masiwutshintshele oku kusasa?" Unokuthiwa kwizwi elinjalo elinomsolo olulandelayo oluthandwayo luya kuchitha ngokulindela ukungahambi kakuhle. Ukumomotheka akuyi kusuka ebusweni bakhe kude kube ngokuhlwa. Okufanayo xa ujika kwi-fairy, ukholisa amehlo akhe, kunye nokuvumba, ukuthintela, ukuva nokuva!
Ulwaphulo-mali - amandla esini kunye nobuchule
Iindlela zokudibanisa ubudlelwane bezesondo zabalingani
Amathambo: i-pros and cons
Ngaba buhlungu intombazana ukuba ilale ngesondo okokuqala?
Xa ungalala ngesondo emva kwecandelo le-care
Ukunyamekela Isikhumba Sensitive
Ukukhetha iimpahla ezifanelekileyo zentsana yakho
Isaladi kunye nama-strawberries kunye nesipinashi
I-Kibo aerobics, isenzo esiyinkimbinkimbi
Iimfashini zefestile zemikhosi zempi
"Ogqwesileyo" - soloko uqala kuyo yonke
IKobler ene rhubarb
Ukunxibelelana okungekho-magama, iimpawu zobuxoki obufihlakeleyo
I-Sorrel evela kwipapa
Impembelelo yomoya emzimbeni womntu